Baxrayn oo Qatar u oggolaatay inay hawadeeda isticmaasho | Star FM
Home Caalamka Baxrayn oo Qatar u oggolaatay inay hawadeeda isticmaasho
Baxrayn oo Qatar u oggolaatay inay hawadeeda isticmaasho
Dowladda Baxrayn ayaa lagu soo warramayaa inay hawadeeda u furtay diyaaradaha Qatar ka dib markii laga heshiiyay xiisad dibloomaasiyeed oo ka dhexeysay saddex sano.
Waxaa arrinkan maanta oo Isniin ah sheegtay waaxda duulimaadyada rayidka ee Baxrayn.
Tani ayaa timid hal maalin un ka dib markii boqortooyada Sacuudi Carabiya ay xuduudeeda u furtay xukuumadda Dhooxa.
Bishii lixaad ee sanadkii 2017-kii ayay ahayd markii dowladaha Masar, Baxrayn, isku tagga imaaraadka carabta iyo Sacuudi Carabiya ay xiriirkii dibloomaasiyeed u jareen Qatar oo ay xilligaas ku eedeyeen inay argagixisada taageerto in kastoo ay iska fogeysay.
Waxaa tallaabadaas xigay inay dhammaantood dowladda Qatar ka xirteen xuduudaha dhanka hawada , badda iyo dhulka hasa ahaate toddobaadkii hore ayay dhinacyadan heshiiyeen.
Sidoo kale waxaa maanta dib u furmaya duulimaadyada u kala gooshaya Sacuudiga iyo Qatar.
Previous articleDHAGEYSO:Maleeshiyo dad afduubtay oo lacag lagu wareejiyay
Next articleMidowga jmusharaxiinta iyo madaxda qaar oo kulan yeeshay